(L) သန့်စင်သောအသစ်အဆန်းက ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်
(L) သန့်စင်သောပစ္စည်းအသစ်အဆန်းစပါးအဆိုပါဦးနှောက် (2006)
မှတ်ချက်များ - ဤဆောင်းပါးသည်အဓိကအားဖြင့်လေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံသည်။မသိသော၏ဆွဲဆောင်“ လေ့လာမှုကပြသခြင်းက dopamine ကိုအကောင်းဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုက dopamine အဆင့်ကိုခုန်ကျော်သွားစေနိုင်သည်။ သငျသညျကိုသွားသို့မဟုတ်သဘာဝက satiation override ရရန်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်တစ်ခုခုအမြဲရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်အသစ်အဆန်းသည်သင်ယူခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးစွဲလမ်းမှုသည်“ အလွန်အမင်းသင်ယူခြင်း” ဖြစ်သည်။
Neurobiologists တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်ရှာဖွေရေးနှင့်သင်ယူမှု sparks သိရပါပြီ, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်သာဦးနှောက်တကယ်ကဲ့သို့သောအသစ်အဆန်းကြိုက်နှစ်သက်သည်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ၎င်းအစား ဦး နှောက်၏“ အသစ်အဆန်းစင်တာ” ဟုခေါ်သော sustia nigra / ventral tegmental (ရိယာ (SN / VTA) သည်မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု၊ ၎င်းဖြစ်ပေါ်စေသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှိုးဆွမှု၊ သို့မဟုတ်အမူအကျင့်ကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်ခြင်းတို့ဖြင့်လှုပ်ရှားနိုင်သည်။ SN / VTA သည်သင်ယူမှုအပေါ်အဓိကသြဇာသက်ရောက်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏သင်ယူမှုစင်တာဖြစ်သော hippocampus နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပြုပြင်သည့်ဗဟို amygdala နှစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခုတော့သုတေသီများ Nico Bunzeck နှင့် Emrah Düzel အဆိုပါ SN / VTA ထိုကဲ့သို့သောနှင့်ဤအသစ်အဆန်းအကျိုးကိုရှာဖွေလျက်စူးစမ်းလေ့လာဖို့အတွက်ဦးနှောက်ကလှုံ့ဆျောအဖြစ်အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်တတ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းညျလူသားတို့နှင့်အတူအစီရင်ခံစာလေ့လာမှုများ။ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်လန်ဒန်နဲ့ Otto von Guericke တက္ကသိုလ်မှသုတေသီဆဲလ် Press ကထုတ်ဝေခဲ့သည်အာရုံခံ၏သြဂုတ်လ 3, 2006, ပြဿနာအတွက်၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
Bunzeck နှင့်Düzelတို့၏စမ်းသပ်မှုများတွင်“ oddball” စမ်းသပ်မှုပုံစံကို အသုံးပြု၍ ပုံရိပ်များသည်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ဦး နှောက်၏ SN / VTA ကိုမည်သို့သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေကြောင်းလေ့လာခဲ့သည်။ ဤနည်းစနစ်တွင်ဘာသာရပ်၏ ဦး နှောက်ကိုအလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အား အသုံးပြု၍ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည် - သူတို့သည်မျက်နှာတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ပြင်ပမြင်ကွင်းများ၏ပုံရိပ်များကိုပြသထားသည်။ သို့သော်သုတေသီများသည်ဤစီးရီးတွင်မတူညီသော (သို့)“ ထူးဆန်းသော” မျက်နှာများနှင့်မြင်ကွင်းများကိုကျပန်းရောထွေးစွာရောစပ်ခဲ့သည်။ oddball တစ်ခုသည်ကွဲပြားခြားနားသောကြားနေပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာကွဲပြားသောပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတေသီများသည်ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ တစ်ခုမှာစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်တစ်ခုနှင့်တစ်မူထူးခြားသောဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။ fMRI တွင်အန္တရာယ်ရှိသောရေဒီယိုအချက်ပြနှင့်သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဦး နှောက်ဒေသများတွင်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။
ဤစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူသုတေသီများသည်မတူညီသောထူးဆန်းသောပုံရိပ်များနှင့်ပတ်သက်သောတုန့်ပြန်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီးစင်ကြယ်သောအသစ်အဆန်းကို ဦး နှောက်၏တုံ့ပြန်မှုကိုအခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှုနှိုးဆွမှုနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။
ဒုတိယ oddball စမ်းသပ်မှုများတွင်သုတေသီများသည် SN / VTA သည်အသစ်အဆန်းကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ သူတို့အားစမ်းသပ်ချက်များတွင်သုတေသီများကွဲပြားသို့မဟုတ်အသစ်သောအဆင့်ဆင့်၏ပုံရိပ်များအားဖြင့်ဒေသ၏ activation တိုင်းတာ။ နှင့်အခြားလေ့လာမှုများအတွက်, သုတေသီများဝတ္ထုပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်အလွန်အကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်များနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါအကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်များ၏ဘာသာရပ်များရဲ့မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းခဲ့ရှိမရှိအကဲဖြတ်။
သုတေသီများတွေ့ရှိချက်အရ SN / VTA သည်အသစ်အဆန်းကိုတုန့်ပြန်သည်၊ ထိုတုံ့ပြန်မှုသည်ပုံ၏မည်မျှဝတ္ထုနှင့်ညီသည်ကိုချိန်ညှိသည်။ သူတို့ကသူတို့၏အချက်အလက်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံကိုတုန့်ပြန်ရန်လိုအပ်မှုစသည့်အခြားလှုံ့ဆော်မှုထူးခြားမှုပုံစံများထက်အသစ်အဆန်းကမောင်းနှင်သော“ အလုပ်လုပ်သောဟစ်ပိုတိုampal-SN / VTA ကွင်းဆက်” အတွက်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ သုတေသီများက SN / VTA ကိုပိုမိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြင့်ပိုမိုသောတက်ကြွမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိချက်သည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုပုံစံများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းသည်အသစ်အဆန်းသည်ဆုလာဘ်ကိုရှာဖွေခြင်းထက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းရန်လှုံ့ဆော်မှုပေးသောအပိုဆုတစ်ခုဟုရှုမြင်ကြသည်။
ဒါ့အပြင် Bunzeck နှင့်Düzelအသစ်အဆန်းအဆိုပါဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာသင်ယူတိုးမြှင့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "ထို့ကြောင့်လူ့ SN / VTA သည်အကြွင်းမဲ့လှုံ့ဆော်မှုအသစ်အဆန်းကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးအသစ်အဆန်း၏အခြေအနေတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသင်ကြားမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်"
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် hippocampus မှရွေးချယ်သည်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာရထိုကဲ့သို့သောလူနာအတွက်အသစ်အဆန်း၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှုပပျောက်နှင့်လူနာများအတွက်အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာလျှော့ချရေးများထဲမှအရင်းအမြစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်ကပြောပါတယ်။
အဆိုပါသုတေသီများလန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်လန်ဒန် Nico Bunzeck, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတို့ပါဝင်သည်; နှင့်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်လန်ဒန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် Magdeburg, ဂျာမနီအတွက် Otto von Guericke တက္ကသိုလ် Emrah Düzel။ ဤလုပ်ငန်းကိုအဆိုပါ Deutsche Forschungsgemeinschaft (KFO 163, TP1) မှတစ်ဦးထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည်။
Bunzeck et al ။ : "လူ့ Substantia Nigra / VTA အတွက်လှုံ့ဆော်မှုအသစ်အဆန်း၏ Absolute Coding ။ " Neuron ၅၁၊ ၃၆၉-၃၇၉၊ သြဂုတ် ၃၊ ၂၀၀၆ DOI 51 / j.neuron.369 www.neuron.org တွင်ထုတ်ဝေသည်
Knutson et al ။ မှဆက်စပ် Preview ။
လူ့ Substantia Nigra / VTA အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်အဆန်းများ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာ Coding ။
အာရုံခံဆဲလျ။ 2006 သြဂုတ် 3; 51 (3): 369-79 ။
Bunzeck N ကို, Düzelအီး
သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Institute မှ, တက္ကသိုလ်ကောလိပ်လန်ဒန်, 17 ဘုရင်မကြီးရင်ပြင်, လန်ဒန်, WC1N 3AR, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။
အသစ်အဆန်းရှာဖွေတူးဖော်ရေးအတွက် substantia nigra / ventral tegmental ဧရိယာ (SN / VTA) တွင်ပေါ်ပေါက် dopaminergic neuromodulation မှတဆင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် hippocampal plasticity မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်တိုးမြှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အားဖြင့်ရှာဖွေရေးအဆင့် outlast နိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်နည်းနည်း dopaminergic အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လူသားတွေအတွက် hippocampal function ကိုရန်၎င်း၏ကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ နှစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှုများအတွက်လူသားများအတွက် SN / VTA Active အမှန်ပင်မဟုတ်ဘဲယင်းသို့သောရှားပါး, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence, ဒါမှမဟုတ်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ပစ်မှတ်အဖြစ်လှုံ့ဆော်မှု salience ၏အခြားပုံစံများကိုထက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်အဆန်းများကမောင်းထုတ်ခံခဲ့ရ, hippocampal တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်သော်လည်း။ SN / VTA အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုမကြာသေးမီကတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်ဆုလာဘ်ရလဒ်ကိုများအတွက်အစီရင်ခံသပ္ပါယ် SN / VTA တုံ့ပြန်မှုမတူဘဲပေးထားသောအခြေအနေတွင်အကြွင်းမဲ့အာဏာထက်ဆွေမျိုးအသစ်အဆန်းအဆိုအရခဲ့သည်ဆို၏ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသစ်အဆန်းသင်ယူမှုနှင့်အတူတူပင်အခြေအနေတွင်တင်ပြအကျွမ်းတဝင်ပစ္စည်းများ parahippocampal / perirhinal အပြောင်းအလဲနဲ့တိုးမြှင့်။ ထို့ကြောင့်လူ့ SN / VTA အကြွင်းမဲ့အာဏာလှုံ့ဆော်မှုအသစ်အဆန်း code နိုင်ပြီးအသစ်အဆန်း၏အခြေအနေတွင်သင်ယူတိုးမြှင့်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။